Elon Musk anopa Bitcoin kumwe kurova, asi Justin Sun waTron anoti akazvifukidza
Bitcoin yakawirwa nedambudziko rekutenderedza 5% pakutanga kwevhiki uye nyanzvi dzinobatanidza kudonha uku Elon Musk's yazvino Twitter zvirevo.
Justin Sun ati achanwa zvinwiwa zvese zveBitcoin zvinotengeswa naTesla CEO sezvo Musk achiratidza chikwata chikuru kubva kuBitcoin.
Kunyange hazvo mushumo mutsva wakaburitswa kutanga kwesvondo rino wakaratidza kuti simba raElon Musk mumusika we crypto rakadonha zvakanyanya, izvo zvinoramba zvichionekwa. Kutaura kwake paBitcoin kwakaratidza kukanganisa mitengo neChishanu, kuchimutadzisa kutora kudzoka kunodiwa.
Pakutanga muvhiki, iyo dijiti pfuma yakakwira kusvika ku $ 39,000. Sezvo Bitcoin yakawira pasi pe $ 40,000 mwedzi wapfuura, mambo wecrypto akatambura kuti apfuure pamusoro peyero. Kupfuura maawa makumi maviri nemana apfuura, mari yacho yakabvisa madhora zviuru zviviri kuti adzokere pachinzvimbo chemadhora zviuru makumi matatu nezvitatu. Nyanzvi dzemusika dzinopa mubairo weplongeo azvinon kuna Elon Musk anga ave tweeting
nezve cryptocurrency uye achinyatso kuratidza chidimbu kubva kuBitcoin.
Tesla CEO akataura nezvekuparadzaniswa neBitcoin.
- Elon Musk (@ elonmusk) June 4, 2021
Izvi hazvishamise sezvo muzvinabhizimusi uye bhizinesi tycoon vakatsoropodza Bitcoin nekushandisa kwayo simba. Apo CEO paakaita sarudzo yekumisa Bitcoin kubhadhara kwemotokari dzemagetsi dzaTesla, zvakatora mutengo pamitengo. Asi chakanyanya kunetsa nharaunda ndechekuti kambani iyi yaizorasa here iyo $ 1.5 bhiriyoni muBTC
yakatengwa pakutanga kwegore.
Panguva iyo Elon aive avimbisa musika kuti kambani yakanga isina chinangwa chekutengesa. Asi nharaunda inoziva kuti inogona kuchinja chero nguva, nekudaro kutya kwazvino kunotengesa. Kunyangwe simba rayo mumusika riri kuderera, muridzi wayo anoramba ari chokwadikiyi kukudziridzwa kwemutengo wepfupi.
VERENGAzve: Justin Sun anoda kutenga kutengesa kwese kweBTC Elon Musk
Panguva yeBitcoin yazvino donhwe, muvambi weTron Justin Sun anozvikudza
kuti anga atenga mamirioni emadhora anokosha eBitcoin neEthereum. Akaenderera mberi achidaidzira munharaunda yekristpto kuti itenge zvimwe uye itarise pachinangwa chenguva refu uye kwete iko kuita kwenguva pfupi.
Muvambi akakurumidza kupindura kuzvinoitika zvazvino. inotaura. Mune tweet, Zuva raiti raizotenga zvese zveBitcoin zvakatengeswa naElon Musk. . Zvisinei, kune vazhinji vari munharaunda ye crypto kutya ndeyekuti chiitiko ichi chave pedyo..
Mumavhiki mashoma apfuura, Bitcoin yanga ichitaurirana nevatengesi vasingazivi kuti mitengo irikuenda kupi. Nekudaro, anonyanya kutarisana nenhau dzisina kunaka, izvo zvinotsanangura kudonha kwe5% kunokonzerwa neElon's Tweet. Ruzhinji rwevanyanzvi vanoramba vakatarisa pamaonero enguva refu uye vane chivimbo chekuti inozotenderera yopedzisa gore riri pamusoro pe $ 100,000, sekugara kuchifungidzirwa.
Hackernoon ajoina iyo blockchain yemitambo mubatanidzwa
2021-06-22 21:59:39 | Blockchain
HackerNoon ajoina iyo Blockchain Game AllianceNdinofara kuzivisa kuti HackerNoon yapinda muBlockchain Game Alliance. Isu takazvipira kubatsira iyo blockchain mutambo indasitiri kuti ikure uye ive chikamu chakakosha cheiyo vhidhiyo mutambo indasitiri seyakazara. Tichishandisa chinzvimbo chedu senge r...
Kunyangwe paine njodzi dzekuisa pakati, iyi ndiyo kiyi yekukura kwekrispto - isina kukurumidza # 10
2021-06-22 21:36:24 | Blockchain
Kunyangwe paine njodzi dzekuisa pakati, iyi ndiyo kiyi yekukura kweCrypto - Unhashed # 10 Chimwe chezvinhu zvinoshamisa kwazvo pamusika we crypto ndechekuti inogara online 24/7, mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu pagore. Kune vatengesi, chikomborero. Iko hakuna nguva yekumisikidzwa pane ...
Dambudziko rakatsanangurwa: iyo gwara kune yakadzika mari
2021-06-22 21:22:45 | Blockchain
DeFi Yakatsanangurwa. DeFi tokeni anga ari pakati pezvakanyanya kuita zvemadhijitari zvegore, nekubhadharwa kukuru. Asi, vatengesi vekristpto vachiri kunetsekana kuti vanzwisise kuti chii chinonzi DeFi. DeFi, yeDecentralized Finance, inotora pfungwa yakatemerwa ye cryptocurrency yoishandisa kune iyo...
Pfungwa yechitatu yaLoeb inotungamira ku $ 27 mamirioni ekudyara mu crypto kuteedzera kutanga ciphertrace
Crypto intelligence firm CipherTrace yakavhara $ 27.1 miriyoni Series B inotungamirwa neDan Loeb's tech invest firm femu yeTatu Point Ventures, CoinDesk yadzidza. vatangi vekutanga Neotribe, Acrew uye Seraph Group. CipherTrace ndeimwe yemakambani makuru esoftware anoshandira vaongorori vehurumende n...
Norwegian fsa inoti hurongwa hwepamutemo hunodiwa mu crypto kuchengetedza vatengi
2021-06-22 18:56:44 | Blockchain
Sangano reNorway Financial Supervisory Authority (FSA) rakati neChipiri kuti hurongwa hwepamutemo hwaidikanwa kuti mari yemari ive nzira yakakodzera yekudyara vatengi. Muchinyorwa, iyo FSA yakati panguva yedenda, mari yemadhora yakawana kutarisisa pamwe nekukosha mhosva. Uye zvakare, kusagadzikana k...
Anchor inowedzera kuchengetwa uye staking yeDapper Labs kuyerera chiratidzo
2021-06-22 18:52:07 | Blockchain
Yakagadziriswa crypto-bank Anchorage Digital yakati neChipiri ichapa kuchengetwa uye staking rubatsiro rweFLOW, chiratidzo chechizvarwa cheRwizi blockchain. Sekureva kwaSachigaro weAnchorage Diogo Monica, danho rekambani rekutsigira FLOW raive pamusoro pe "kudiwa kukuru" kubva kusangano rayo. vateng...
Stronghold Dhijitari Mining Inosimudza $ 105 Mamirioni Kuti Uchinje Marasha Emarara Kuti Aite Bitcoin
2021-06-22 18:50:39 | Blockchain
Kurwira kuchenesa-simba-kwakakwenenzverwa kucherwa kwemari yemari yakakwidzwa neChipiri seStronghold Digital Mining, imwe simba rinopa simba kudhijitari, yakazivisa mari inosvika mamirioni zana nemakumi mashanu emadhora. Kuwedzera uku kunobva kunzvimbo mbiri dzekuchengetedzeka kwemari, nevatengesi v...
Bitcoin inowana rutsigiro pa $ 30,000; kutarisana nekupokana pa $ 36,000
2021-06-22 18:49:06 | Blockchain
Bitcoin (BTC) kutengesa kwagadzikana kusvika pamadhora zviuru makumi matatu kubva Muvhuro, izvo zvinogona kukwezva vatengi venguva pfupi. Kukwira uku kunoratidzika kunge kunogumira padyo padanho rekushomeka remadhora mazana matatu nemazana matatu ezviuru zvakapihwa iyo inenge mwedzi mitatu yekudonha...
Indian crypto vatengesi vanogona kutarisana ne2% mutero pakutenga kubva kune dzimwe nyika
MaCryptos akatengwa kubva kumakambani ekunze nevashambadzi muIndia anogona kubhadhariswa 2% levy, sekureva kweEconomic Times mushumo. Indian Tax department iri kuongorora kana 2% yekuenzanisa levy inoshanda kune crypto assets, iyo Economic Times yakashuma neMuvhuro. vanhu vane ruzivo rwenyaya iyi. I...
Vaongorori vakapatsanura pane bitcoin mutengo maonero se $ 30,000 beckons
2021-06-22 18:44:37 | Blockchain
Sezvo bitcoin inoswedera kutsigira pa $ 30,000, vaongorori vakapatsanurwa pane zvichaitika zvinotevera. Vamwe vanoona danho iri richichengetwa uye richidzokera kumadhora zviuru makumi mana. Vamwe vanonongedza kushomeka kwekudaira uye vanoti zvimwe kuderera kunogona kuitika. "Hatifunge kuti kune akaw...
Chinese bitcoin mugodhi kambani inounza ekutanga michina kuKazakhstan
2021-06-22 18:37:26 | Blockchain
Chinese bitcoin miner BIT Mining yakaendesa yavo yekutanga batch yemuchina mazana matatu nemakumi matatu kuKazakhstan mushure mekushanda mudunhu reChina reSichuan kumiswa, kambani inotengeswa neruzhinji (NYSE: BTCM) inoronga kuendesa mimwe michina mazana maviri nemazana matanhatu pamberi pemwedzi wa...
Moonpay inotora yakakosha danda mu crypto banking service provider bcb boka
Iyo MoonPay mari yekubhadhara mari yemadhora yapinda mukudyidzana kwakabatana neBBCB Group, bhizinesi-kune-bhizinesi mupi wemabhangi njanji kumakambani eecrypto. Kubatana kwacho kunosanganisira kutora kweMoonPay kwe "yakakosha" danda muBBCB Group, makambani akadaro, achisimbisa kuti chibvumirano hac...
A16z vanobatana na deutsche telekom kubaya celo tokens
2021-06-22 18:30:31 | Blockchain
Deutsche Telekom, imwe yemakambani anotungamira ekutaurirana eEuropean, vanobatana nekambani hofori hofori Andreessen Horowitz (a16z) kubatsira kuchengetedza Celo yekubhadhara netiweki, nhare-yekutanga, kufamba inowedzera inosimbisa chinzvimbo chinoshamisira chinzvimbo chekutaurirana padanda rayo mu...
El Salvador vanopikisa bato MP inomhan'arira nyika pamusoro pemutemo bitcoin
2021-06-22 18:28:51 | Blockchain
Nhengo yedare reparamende yebato rinopikisa muEl Salvador uye boka revagari vakamhan'arira hurumende pamusoro pemutemo mutsva wenyika bitcoin, vachizviti zvinopesana nemutemo. Farabundo Marti National Liberation Front (FMNL) yakabatana nechikwata chevagari kupikisa mutemo. ...
Jim Cramer, muridzi we 'Mad Money', anoti akatengesa akawanda eake bitcoin zvichitevera kupambwa kweChina
Jim Cramer, muridzi weCNBC "Mad Money", akati akatengesa zvizhinji zvezvinhu zvake zvekutevera zvichitevera kubiwa kweChina nevashandi vemigodhi vekristpto mudunhu reSichuan. CNBC's "Squawk Box" neMuvhuro, Cramer akati bitcoin yaive nematambudziko echimiro uye mutengo wayo ungangoenderera Cramer aka...